အကောင်းဆုံးမက္ကဆီကန် Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း Linux မှ
အကောင်းဆုံးမက္ကဆီကန် Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း
ဤတွင်စာရင်းတစ်ခုဖြစ်သည် အကောင်းဆုံးမက္ကဆီကန် distros လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် သူတို့တစ်တွေရှိသည် အသိုင်းအဝိုင်း y ထောက်ပံ့ ငါဒီဟာကိုရှာရတာနည်းနည်းစိတ်ပျက်မိတယ်ဆိုတာဝန်ခံရမယ် အရေအတွက် နှင့် အဆင့် မက္ကဆီကန် Linux distros များ၏အတော်လေးသည် အောက်သော အရာကျနော်တို့ distros အတွက်ရှာတှေ့နိုငျပါသညျ စပိန်ဘာသာ (Trisquel, etc), အာဂျင်တီးနား (Tuquito, etc) သို့မဟုတ်ဗင်နီဇွဲလား (Canaima, etc) ပင်။
Orvitux သည် Unity Linux ကိုအခြေခံသည့်မက္ကဆီကန် "rolling release" linux ဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်စီးပွားဖြစ်နှစ် ဦး စလုံးအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းတွင် livecd၊ အလိုအလျောက် hardware ရှာဖွေခြင်း၊ wifi အထောက်အပံ့၊ TrueType ဖောင့်စသည့်ခေတ်မီအင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်သည်။
စတင်မိတ်ဆက်ရန်အတွက်သင်သည် ၆ လစောင့်ဆိုင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ ဒီ distro လူအပေါင်းတို့သည်အချိန် update လုပ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » အကောင်းဆုံးမက္ကဆီကန် Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း
Fausto Zavala ဟာနန်ဒက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
Pepe Neif ရဲ့ပထမဆုံးမက္ကဆီကန် LinuxPPP distro ကို ၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်းမှာဖော်ပြဖို့လိုတယ်လို့ငါထင်တယ်။
ငါဒီဖြန့်ဖြူးတော့ဘူးမတည်ရှိပါဘူး, ငါရှင်းလင်းရမယ်, ဒါပေမယ့်သမိုင်းကိုသိရန်ကောင်းလှ၏။
၎င်းသည်မှတ်တမ်းများကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းအတွက်ပထမဆုံးပထမဆုံးမက္ကဆီကန် distro ဖြစ်သည်။ Pepe ကိုယ်တိုင်မှတ်တမ်းများကိုe၀ ံဂေလိတရားဟောပြောသည့် middle ၀ ံဂေလိအလယ်၌ပို့ခဲ့သည်။ (အသစ်ပြောင်းခြင်း ၂ ခုဝယ်ယူရန်)
၎င်းကိုမက္ကဆီကိုရှိ Linux သုံးစွဲသူများအတွက်တရားဝင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ဤဖြန့်ဖြူးခြင်းမှ ferreos သုံးစွဲသူများကို CACLE (Circo Ambulante de Conferences က Linuxeras de Evangelización) ဟုခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲခြင်းအတွက်တရားဝင် distro အဖြစ်စတင်ခဲ့သည် စနစ်တွေအားလုံးဗဟုသုတကိုဆာလောင်မွတ်သိပ်နေကြတယ်။ ငါသူတို့ကိုအပြစ်မတင်ပါဘူး၊ ငါလည်းအတူတူပါပဲ🙂
Linux နှင့် liter ၀ ံဂေလိတရားကို liter ၀ ံဂေလိယုံကြည်သောဤပုဂ္ဂိုလ်များမှမက္ကဆီကိုရှေ့ဆောင်များအားလုံးကိုကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်ချီးကျူးသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှကွန်ပျူတာကြီးများသို့ကွန်ပျူတာကိုကြည့်ရှုခြင်းနည်းလမ်းကိုသိသိသာသာပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။
Linux ကိုသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသို့မဟုတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများတွင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သောသတ္တိရှိသူအများစုသည်မက္ကဆီကိုရှိ Linux နှင့်ပထမဆုံးလှုပ်ရှားမှုများကြောင့်လှုံ့ဆော်ခံခဲ့ရသည်။
Fausto Zavala Hernándezအားပြန်ပြောပါ
ကောင်းပါတယ်၊ ငါမက္ကဆီကိုကပါ၊ Jarro Negro နဲ့ Orvitux ကိုပဲသိတယ်၊ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲစီမံချက်ကောင်းတွေငါ့တိုင်းပြည်မှာလည်းဖွံ့ဖြိုးတယ်ဆိုတာသိရတာကောင်းတယ်။
ဒါ ALDOS မဟုတ်ပါဘူး http://www.alcancelibre.org/article.php/disponible-aldos-1-4 မက္ကဆီကန်လား?
မှား! ၎င်းသည် INFOCTEC မဟုတ်၊ BeakOS ဖော်ပြချက်တွင် INFOTEC ဖြစ်သည်
Jarro Negro နဲ့အွန်လိုင်းမှာမရှိတော့တဲ့တခြားသူတွေအကြောင်းကိုသာသိပြီးဒီစာအုပ်ကမက္ကဆီကိုမှာရှိတဲ့အခမဲ့အွန်လိုင်းရေဒီယိုကိုဖြန့်ဖြူးပေးတဲ့ Flujos Vivos ကိုလည်းသုံးတယ်။
မင်းကိုငါ AztecOS ထဲမှာလွမ်းတယ် http://www.aztecos.com y http://www.aztecos.org ၁၀၀% မက္ကဆီကန်နှင့်စပိန်ဘာသာစကားဖြင့်ကြိုတင်စီစဉ်ထားပြီးပြူတင်းပေါက်များထက်ပိုမိုလွယ်ကူစွာစတင်အသုံးပြုရန်အသံနှင့်ဗွီဒီယိုကုဒ်များဖြင့်ပါ။ ရွှင်လန်း!
ဘယ်သူ့ကိုမှအလုပ်မလုပ်ချင်ဘူး။ ဒါဟာကိုယ့်ငါ့ကိုကြောင်းစှဲကိုပေး၏။ ငါမှားနိုင်တယ်
BeakOS အတွက်သင်ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်ကတိက ၀ တ်အတွက်သင့်ကိုကျွန်ုပ်ဂုဏ်ယူပါတယ်။
ယေရှု manuel hernandez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် Jesus Manuel Hernnadez ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ orvitux စီမံကိန်းကိုဖော်ပြသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင်၏မှတ်ချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်အဝတ်များကိုမချိုးပါ။ «မက္ကဆီကန် Linux ၏နံပါတ်နှင့်အဆင့်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ကျွန်ုပ်သည်အနည်းငယ်စိတ်ပျက်မိကြောင်း ၀ န်ခံပါသည်။ distros များသည်စပိန် (ထရစ်စ်ဘယ်လ်၊ စသည်တို့)၊ အာဂျင်တီးနား (တူကစ်တိုစသည်တို့) သို့မဟုတ်ဗင်နီဇွဲလား (ကာနင်စသဖြင့်) တွင်တွေ့နိုင်သည်ထက်များစွာနိမ့်သည်။ » ငါတို့စီမံကိန်းသည်အခြား distros များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အသစ်ဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားသူများ၏အဆင့်ကိုတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြိုင်ဆိုင်မှုနယ်ပယ်တစ်ခုကိုရှာဖွေနေခြင်းမဟုတ်ပါ၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် distro တစ်ခုစီ၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိသောကြောင့်ဖြစ်သည် (metadistro) စာရေးသူကကျွန်တော်မမှတ်မိဘူးသောစကားစုကိုရေးသည်။ , binary, lfs..etc) ။ ကျွန်ုပ်သည်အခြားသူများကိုမည်သို့ကျော်လွှားရမည်ကိုမသိ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမည်သို့ကျော်ဖြတ်ရမည်ကိုသာသိသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းကြောင်းရှာရန် Orvitux ၏အလုပ်အတွေးအခေါ်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ပညာရေးနှင့်အစိုးရအေဂျင်စီတွင် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏အရင်းအမြစ်များအားလုံးသည်ရပ်ရွာမှဖြစ်ပါသည်
ငါတို့ကိုအာကာသထဲနေရာပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းတို့အနာဂတ်မှာမင်းကိုစိတ်ပျက်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့မျှော်လင့်လို့ပါ။ Jocker ကမင်းရဲ့မျက်နှာကိုအပြုံးနဲ့ဘယ်လိုပြောမှာလဲ။
PS: ထင်မြင်ချက်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းဘယ်တော့မှမလုပ်ပါနဲ့၊ သင်ရဲ့မှတ်ချက်တွေနဲ့ကျွန်တော့်ကိစ္စမှာသင်လုပ်တဲ့အတိုင်းဖြန့်ဖြူးမှုကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ပါ။
Jesus manuel hernandez အားပြန်ပြောပါ
Gustavo Zepeda ဟုသူကပြောသည်
ငါ Chiapas ရှိအထက်တန်းကျောင်းတွင်ကွန်ပျူတာဆရာတစ်ယောက်နှင့်နေ့လည်ခင်းတွင်ပရိုဂရမ်မာတစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်ငါပြောချင်သည်မှာသခင်ယေရှုမင်း။ မင်းသည်သင်၏အနှောင့်အယှက်များနှင့်သင့်ကိုပထမဆုံးဂုဏ်ပြုခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ သင်၏ distro တိုးတက်မှု၊ ကျွန်ုပ်တွင်တစ်နှစ်ဘွဲ့ရရှိထားပြီးကျွန်ုပ်၏တက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားများသည်သင်၏ပရောဂျက်တွင်ပါ ၀ င်ရန် ၀ မ်းသာပါလိမ့်မည်၊
Gustavo Zepeda ကိုပြန်ပြောပါ
ယရှေု Arriola Villarreal ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည် Beakos GNU / Linux Development Coordinator ဖြစ်သည်။
မက္ကဆီကန် Linux distros အရေအတွက်နှင့်ပမာဏသည်စပိန် (Trisquel စသည်တို့)၊ အာဂျင်တီးနား (Tuquito စသည်) သို့မဟုတ်ဗင်နီဇွဲလား (Canaima) တို့တွင်ပင်တွေ့နိုင်သည်ထက်များစွာနည်းနည်းစိတ်ပျက်မိကြောင်းကျွန်ုပ်ဝန်ခံရမည် , etc) distros ။ စသည်တို့) ။ "
Beakos GNU / Linux ၏ထူးခြားသောဖြစ်ရပ်တွင်အခြား distros များနှင့်မတူဘဲ၎င်းသည်ဖက်ဒရယ်အစိုးရမှတိုးမြှင့်ထားသောစီမံကိန်းဖြစ်ပြီးမက္ကဆီကိုရှိကြီးမားသောသုတေသနစင်တာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုမှတ်ချက်ပေးသည်။ LFS ကိုအခြေခံပြီးဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်သည့်အပြင်၊ ၎င်းတွင်ထည့်သွင်းထားသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် metadistro သို့မဟုတ် debian, fedora, Slackware စသဖြင့်အချို့သောဖြန့်ဖြူးသောအခြေခံအဆောက်အအုံများထက်ပိုမိုကြီးမားသည်။
ဥပမာ Canaima ၏ဖြစ်ရပ်တွင်အပူပိုင်းဒေသဖြစ်သော debian distro တစ်ခုဖြစ်ပြီးမကြာသေးမီက Beakos နှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ကောင်းမွန်သောချီးမွမ်းမှုများရှိခဲ့သည့်ဗင်နီဇွဲလား၏ CNSL တွင်အလွန်ပါ ၀ င်မှုရှိသည်။
တိုးတက်မှုများကိုယေဘူယျမပြုလုပ်ပါနှင့်။ သင့် Beakos ကိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းဖြင့်မြင်ခဲ့ကြသောသင့်နိုင်ငံမှနောက်လိုက်များရှိလူမှုရေးကွန်ယက်များမှပင် ကျေးဇူးပြု၍ သင့်အားကျွန်ုပ်ပြောလိုပါသည်။
ယရှေု Arriola Villarreal
Jesus Arriola Villarreal အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်းများ၊ အင်တာနက်ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုရင်းကျွန်တော်ရဲ့သူငယ်ချင်းဇီဝဗေဒပညာရှင်ဒန်တေးကိုသူ့စာမျက်နှာပေါ်မှာတွေ့ခဲ့တယ် http://darwinosx.blogspot.com/ DarwinOS ဟုကျွန်တော်ခေါ်သော Linux မူကွဲတစ်ခုသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၄ ခုရှိပြီး Darwin Os အခြေခံ၊ Darwin စတူဒီယို၊ Darwin ရုံး၊ Darwin Design နှင့်မကြာမီ Darwin Ultimate တို့ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်အလွန်ကောင်းမွန်သော linux ဗားရှင်း ဖြစ်၍ အမြင်အာရုံနှင့်ထောက်ခံချက်များစွာရှိသည်။ link ။
သင်က“ Trisquel” အစား“ Triquel” ကိုသွင်းလိုက်ပြီ
စာရေးရန်အချိန်ယူရသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ့စကားများဖြင့်မည်သူ့ကိုမျှမမှားပါစေဟုငါမျှော်လင့်မိသည်။ သူတို့နဲ့အတူခဏကစားတဲ့အခါငါခံစားခဲ့ရတာပဲ။ : S အကယ်၍ သူတို့ဟာဗားရှင်းတစ်ခုစီတိုင်းမှာတိုးတက်လိမ့်မယ်။
အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လိပ်စာဟောင်းနှင့် orvitux ဒိုမိန်းအလုပ်မလုပ်တော့ကြောင်းသတိပြုမိပါက bandwidth ကုန်ကျမှုနှင့်ဆိုက်၏အခြားကုန်ကျစရိတ်များဆက်လက်မသွားနိုင်ခြင်းကြောင့်အကြောင်းပြချက်မှာစီးပွားရေးဖြစ်သည်၊ ကုန်ကျစရိတ်များလျှော့ချရန် uni.me ဒိုမိန်းပါသော wix site တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရက်အနည်းငယ်အတွင်းအရာခပ်သိမ်းသည်မကောင်းသောသတင်းမဟုတ်ပါ။ Debian testing အပေါ် အခြေခံ၍ orvitux အရသာအသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့စတင်မည်။
liquorix kernel ကို 3.9.8
ငရုတ်ကောင်း - flash ပါသောခရိုမီယမ် (google chrome)
သစ်ကြံပိုး 1.8 ။
ထိုအ ppa manger ... နှင့်ပိုပြီး
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်အသစ်ကို ၀ င်ရန်သင့်အားဖိတ်ကြားပါသည် http://orvitux.uni.me/ အချို့အစိတ်အပိုင်းများကိုဒီဆောက်လုပ်ရေးပေမယ့်မကြာမီအပြည့်အဝလည်ပတ်လိမ့်မည်ဟု
Marco Antonio ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းသောနေ့။ မင်းရဲ့အဆိုပြုချက်တွေကိုဖတ်တယ် ငါ linux ကိုပြောင်းချင်တယ်၊ ရင်းနှီးဖော်ရွေတဲ့ version ကိုရှာချင်တယ် မျက်လုံးနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည့် PCE တွင်ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်မိသားစုကိုညှိနှိုင်း။ ရသောအရာတစ်ခုကျွန်ုပ်အလိုရှိသည်။ ကျေးဇူးတင်စကားတစ်ထောင်ကိုရှာဖို့နေရာတွေအကြောင်းပြောပြပေးပါ ဦး
marco antonio အားပြန်ပြောပါ
အန်တိုနီယိုမာကို! အလွယ်ကူဆုံး linux ဖြန့်ဖြူးမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ငါ linux mint သို့မဟုတ် lubuntu ကိုအကြံပေးလိုသည်။ ၎င်းတို့သည် winxp နှင့်ဆင်တူသည့် interface ရှိသူများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းဟူသောအချက်ကိုအကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
Linux နဲ့ Win ကိုဘယ်လို install ရမယ်ဆိုတဲ့မေးမြန်းချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအောက်ပါ post နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုဖတ်ပါ။
အားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်။ အလွန်ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါလည်းဗားရှင်း ၅ မှာရှိနှင့်ပြီးဖြစ်တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်လောက်က Puebla ရှိ BUAO မှာပြုလုပ်ခဲ့သော FLISOL ညီလာခံတစ်ခုမှာ Aztli Linux အကြောင်းပြောဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်ုပ်ခံစားရတယ်။ ဘာမှမရှိဘူး စီမံကိန်းနှင့်တက္ကသိုလ်နှင့်အတူလုပ်ရန်, ငါ distro ကောင်းစွာငါမြင်ကတည်းကငါကပိုပြီးရှာဖွေနေခြင်းမရှိဘဲငါလိုအပ်သမျှအရာအားလုံးရှိခဲ့ကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိ, ငါဖော်ပြချက်၏လင့်ခ်နှင့်စာမျက်နှာ၏ link ကိုစွန့်ခွာ:
ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်း LMDE 201108 RC
TuxInfo မဂ္ဂဇင်း # ၄၀ ထွက်ပြီ။